राणा प्रधानमन्त्री १९०६ साल चैतमा बेलायत, फ्रान्स र इजिप्ट जाँदा कलाकार भाजुमान चित्रकार पनि साथै थिए । १९०७ माघमा फर्केपछि नेपालमा चित्रकला र वास्तुकलाको कस्तो विकास भयो भन्ने दरबारहरूको निर्माणले देखाएको छ । १९०८ सालमा चन्द्रसमशेर बेलायत जाँदा दीर्घमान चित्रकार साथै थिए । उनले त्यहाँ युरोपेली कलाको थोरै अध्ययन गर्न पाए जुन उनको कलामा पनि झल्किन्छ । त्यसपछि कुनै व्यक्ति कलाकारको हैसियतले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिसँग… विस्तृत समाचार
नेपाल सरकारले धेरै वर्ष एउटै मन्त्रालय, विभाग र संस्थामा रहेका कर्मचारीलाई प्रदेशतिर सरुवा र काज पठायो तर त्यसमा विवाद आयो । कुन कानुनमा छ कि युनियनको कर्मचारी सरुवा गर्न नपाइने र सरुवा भएकालाई त्यही स्थानमा वर्षौंवर्ष टिकाउने ? रक्षा मन्त्रालयका शा.अ. र ना.सु.को सरुवा युनियन अध्यक्ष भएको कारण रोकिएको छ, ती १५ वर्ष एउटै शाखामा बसेर वर्षौं हालीमुहाली गरेर हामी जो आए पनि रिझाएर बसेका… विस्तृत समाचार
नेपाली समाजबाटै आएका सैनिक अधिकृतहरू विभिन्न गैरकानुनी काममा लिप्त भएको खबर बेला–बेला सार्वजनिक हुने गरेकै हो । केही यस्ता घटना पनि छन्, जो सुन्दै अचम्म लाग्छ । धेरैअगाडि अमेरिकास्थित राजदूत विश्व प्रधान किताब चोर्दाचोर्दै पक्राउ परेका थिए । नचोरी नहुने रोग (क्लेप्टोमेनिया) बाट ग्रसित उनको त्यही निहुँमा जागिर खुस्किएको थियो । त्यस्तै रोग भएका अफिसरहरु सेनामा पनि प्रशस्तै छन् । केहीले ठूलै दर्जामा पुगेर अवकाश… विस्तृत समाचार
रमाइलो छ राजपामा । कोही माननीयलाई पार्टीकै नेता–कार्यकर्ताले नचिन्ने, कोही माननीय शपथ लिनै नआउने ! प्रतिनिधिसभाकी एक जना मान्य गायब । न त पार्टीको सम्पर्कमा, न संसद् सचिवालयकै । संसद् सचिवालयका कर्मचारी तिनको खोजी गर्दामा हैरान छन् । केन्द्रमा नरमाया ढकाललाई चिन्ने र तिनको सम्पर्क नम्बर राजेन्द्र महतोबाहेक अरूसँग नभएझैं हालत हो उनको पनि । व्यक्तिगत विवरणमा उल्लिखित ठेगाना पच्छ्याउँदै कर्मचारीले रूपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका–४ स्थित… विस्तृत समाचार
झूठो विवरण पेस गरी पोखरा– १० को ठेगानामा नागरिकता लिएका मोरङका मिलन परियार र उनलाई सहयोग गर्नेहरुलाई कास्की प्रहरीले समातेको छ । परियार र साक्षी बसेका पोखरा– १० का सम्मरबहादुर श्रेष्ठ, मनवीर गुरुङ, तत्कालीन वडासचिव नवराज थापा र मिलनकी सासूआमा मनकुमारी परियारसहित आठ जना पक्राउ परेका हुन् । श्रेष्ठ अहिले वडासदस्य छन् भने गुरुङ पूर्ववडाध्यक्ष हुन् । मिलन परियारले सासू मनकुमारीको सहयोगमा नागरिकता बनाएका थिए… विस्तृत समाचार
काठमाडौंको वर्गदृष्टि साप्ताहिकविरुद्ध चितवनबाट उजुरी परेको छ । कुनै व्यक्ति वा समूहको लगानी भए पनि मिडिया सार्वजनिक सम्पत्ति हो र यसले कसैलाई काखा–पाखा गर्न हुँदैन । नेपालको पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ को परिच्छेद ३ ‘सामाजिक दायित्व’ अन्तर्गत बुँदा नं. ५.१ मा सञ्चारमाध्यमले भेदभाव हुने गरी सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने भनिएकै छ । त्यसमा ‘जातीय, लंैगिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, भाषिक, राजनीतिक विचारधारा, वर्ण वा शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाजस्ता… विस्तृत समाचार
मुलुककै पुरानो विश्वविद्यालय कसरी ध्वस्त हुने बाटोमा छ भन्ने तथ्य हो यो । विश्व बैंकले तेरो विश्वविद्यालय खत्तम भयो, सुधार भनेर दिएको अनुदान योग्य र सक्षम नभई दलका झोले कार्यकर्ताको पोल्टामा पर्ने खतरा देखिँदै गएको छ । त्यही अनुदान पचाउने ध्येयले शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् एक जना लेक्चरर । मलाई प्राध्यापक बनाइदेऊ भन्दै कहिले बूढानीलकण्ठतिर पुग्छन् त कहिले बालुवाटारतिर । आरजु राणाहरूको लगानी रहेको नामी… विस्तृत समाचार
​छोरा पनि कतिसम्मका भने...
उहिल्यैदेखि न्युरोडतिर नाम चलेका बाजा बेच्ने बाजे थिए, हार्मोनियम माइला नामका । छोरा कृष्णभाइ तण्डुकार नै ७०–७५ वर्ष भैसके । उनकै छोरी हुन् डा.सगुना श्रेष्ठ । अहिले यो परिवारमा किचलो छ, सम्पत्तिको ! कृष्णभाइकै बाबु–छोराबीच ०४४ सालमा अंशबण्डा भएको देखिन्छ । कृष्णभाइले तीन वर्षअघि न्युरोडस्थित ब्रिटिश गोर्खा सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका थिए । पैसा राख्न जाने क्रममा छोरा पनि साथै थिए । त्यहाँ… विस्तृत समाचार
धार्मिक हिसाबले मात्रै होइन, आर्थिक रूपमा पनि धनी मानिएको बागेश्वरी मन्दिरको नाममा रहेका पुराना ढुकुटी खोलिएपछि नेपालगञ्जमा सबैको खुलदुली मेटिएको छ । मन्दिरको नाममा रहेका ती ढुकुटीभित्रको सम्पत्ति यकिन गर्न ४५ वर्ष लागेको छ, अघिल्लो बुधबार मात्रै उक्त ढुकुटी खोलिएको थियो । ढुकुटीभित्र धेरै संख्यामा सुन, चाँदीलगायत बहुमूल्य सम्पत्ति रहेको आकलन गरिएको भए पनि जीर्ण अवस्थामा रहेका बाकसमा भने २ तोला सुन र २० किलो… विस्तृत समाचार
प्रचण्डको बडीगार्ड बसेका प्रमुख सेनानी पवन खत्रीले सरकारी गाडीको सेतोप्लेटलाई झिकेर रातो हाली चढेका छन् । कमरेडले नै सिकाउनुभएको हो कि ? ट्राफिक प्रहरीले किन सही तरिकाले जाँच गरेका छैनन् ? रासन पानीदेखि माछामासुसम्म घर लैजानमा बल छ । इन्टेलिजेन्स शिक्षालयमा तालिम गर्नेलाई कुन दिन क्लास लिएका छन्, जुन दिन प्रथम गरेर अन्तिममा आए त्यहाँभन्दा बाहेक खानपान के कस्तो छ, कुनै दिन सोधेनन् । हामीले… विस्तृत समाचार